Myat Maw Oo | Colors Rainbow
Myat Maw Oo
August 11, 2017 February 24, 2018 admin 879 Views0Comments Myat Maw Oo	min read
“ဟဲ့… တောင်းစားနေတဲ့ အခြောက်မဆိုတာ နင် မြင်ဖူးလား… ငါတို့ အခြောက်မဆိုတာက ကိုယ်က အမ်းလိုက်တာပဲ ရှိတယ်။ သူ့ဆီက အမ်းတာကို မမျှော်လင့်ဘူး” ဆိုပြီး LGBT လောကမှာ အထူးသဖြင့် အပွင့်မကြီးတွေ လောကမှာ ခပ်ချေချေနဲ့
June 13, 2016 February 24, 2018 admin 774 Views0Comments Myat Maw Oo	min read
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေအနက် လိင်တူချင်း ချစ်ခင်စုံမက်တာကို ရာဇဝတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်အရေးမယူတဲ့နိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြပါမယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံ ငါးနိုင်ငံစလုံးဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာရဲ့ ကိုလိုနီလုပ် ကျွန်ပြုမှုကို မခံရတာဟာလည်း ထူးခြားတဲ့ ဘုံတူညီချက်အနေနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် သို့မဟုတ် တခြားဘာနိုင်ငံပါလို့ပဲ တံဆိပ်ကပ်ထားကပ်ထား
June 8, 2016 February 24, 2018 admin 887 Views0Comments Myat Maw Oo, sport	min read
March 22, 2016 February 24, 2018 admin 649 Views0Comments Myat Maw Oo	min read
ငွေရတုတစ်ခုစာ ဒီကာလအတွင်း ရင်ဘတ်ချင်းအပ် စိတ်ချင်းထပ်ခဲ့တယ်…. ဒီချစ်ချင်းတရား ရမ္မက်သက်သက် မဟုတ် နားလည်မှု၊ ကြင်နာမှုတွေလည်း ပါ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလည်း ပွားပါတယ်…. လိုအပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း အားငယ်နေချိန် ပုခုံးတစ်ဖက်စီဟာ ပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်း မှီနားရာကိုယ်စီ ဖြစ်ခဲ့တယ်… တိမ်လွှာမဲညစ်